Kacha ọhụrụ ikuku njem afụ aja
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Kacha ọhụrụ ikuku njem afụ aja
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • investments • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Travelgbọ njem ikuku na-eme ka ndị na-efe Hindu na-ewere ihe dị nsọ na osimiri Ganges na Eprel 12
Ọrịa COVID-19 a na-atụ ụjọ gbasara ọrịa na-aga n’ihu na-ebibi njem nlegharị anya na njem gburugburu ụwa.
India egosila ụbọchị ọjọọ nke COVID-19 ọhụrụ ebe ọrịa a malitere site na ụnyaahụ ịdekọtara 300,000 na otu ụbọchị ahụ.
Ndị gọọmentị gburugburu ụwa na-enye ịdọ aka na ntị njem na India site na US ruo Germany na ndị ọzọ.
Ebe ụlọ ọgwụ karịrị ike, ikuku oxygen dị ụkọ ya na ụfọdụ mmadụ na-anwụ n ’ụlọọgwụ ka ndị na-akụrụ ikuku na-agwụ.
Onye kachasị ọhụrụ n'ime nkwekọrịta ikuku njem ikuku bụ nkwekọrịta dị n'etiti India na Sri Lanka nke ga-arụ ọrụ site na Eprel 26, 2021. Ka ọ dị ugbu a, eyigharịrị ụbọchị a n'ihi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ọnwụ na India n'ihi coronavirus.
Nsogbu COVID nke India na-aga n'ihu na-akawanye njọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 300,000 na-akọ ụnyaahụ - nke kachasị otu ụbọchị ruo ụbọchị. Gọọmentị na-anwa ime ka ụmụ amaala ya mesie ike na a na-agba mbọ ịchekwaba ikuku oxygen maka ndị na-ekpo ọkụ ka ụfọdụ ụlọ ọgwụ nwere mmadụ 2 n'akụkụ akwa ma ndị mmadụ na-anwụ ka oxygen na-apụ na akụrụngwa na-eme ka ha dịrị ndụ.
Mba agbata obi nke Sri Lanka nwere atụmatụ ịgbaga n'ọtụtụ obodo dị na India na Kushinagar bụ otu obodo ebe India nwere oke mmasị ka ụgbọ elu laghachi na ọdụ ụgbọ elu mba kachasị ọhụrụ. Mkpụrụ nke mmezi a niile na-akwado ịnabata ndị njem ka ejidere ya.